ပင်မစာမျက်နှာ - fastforward
သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးကို အွန်လိုင်းမှာ စတင်ပြီး အသုံးပြုသူတွေအဆင်ပြေစွာဝယ်ယူနိုင်ဖို့ ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းအားတွေအတွက် all-in-one eCommerce platform တစ်ခုသုံးပြီး သင့်ရဲ့ရောင်းအားကိုတိုးမြှင်လိုက်ပါ။
ဒီ platform ကိုအသုံးပြုပြီး ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်တွေရယူမလဲ။
Easy to Sell, Simple to Manage
Track all your sales at once
အလွယ်တကူရောင်းချနိုင်ယုံသာမက စီမံ့ခန့်ခွဲမှုတွေကိုပါ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလုပ်နိုင်ပါ။ အချိန်တိုအတွင်း လုပ်ငန်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုရှာဖွေလိုက်ပါ
ဝယ်ယူသူမိတ်ဆွေဟောင်းတွေအပြင် အသစ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကိုရယူဖို့ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေအသစ်တွေကို လုပ်ဆောင်မယ်။
သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ကိုက်ညီမယ်သူ ၊တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ ၊ ဝယ်ယူသူမိတ်ဟောင်း ၊မိတ်သစ်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အတူ အသေးစိတ်အချက်အလတ်တွေပါ သိရှိနိုင်ပါတယ်။
Take charge of your Inventory and Orders
Manage Customer Orders ​
Order များတွေကို စနစ်တကျဖြစ်အောင် စီမံဆောင်ရွက်မယ်။အော်ဒါကောက်တာတွေ၊ ငွေရေးကြေးရေးတွက်ချက်တာတွေ၊ ကြေညာတာတွေ အပါအဝင် လုပ်ငန်းရဲ့ ထောင့်ပေါင်းစုံကို နည်းပညာနဲ့ အစားထိုးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်
လက်ကျန်ပစ္စည်းစာရင်းကြည့်နိုင်ပြီး ပစ္စည်လိုအပ္မှုကို အကဲျဖတ္နိုင်သည့်အပြင် အမျိုးအစားတူရာပစ္စည်းများကိုလည်း တစ်နေရာတည်း တစုတဝေးတည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ပစ္စည်းများကို အရေအတွက်အကန့်သတ်မရှိ တင်ပြီးရောင်းချနိုင်ပါတယ်။
Harness the Data and Grow
Your Analytics in One Place
ရောင်းအားစာရင်းဒေတာတြေကို website Dashboard တြဲထားပေးထားပြီး သင့်ရဲ့ဈေးကွက်အတွက် လိုအပ်တဲ့ဒတာအပြည့်အစုံတွေကို အလွယ်တကူသိ နိုင်ပါတယ်။
မိမိလုပ်ငန်းကို ပိုပြီး ယုံကြည်အားထားဖွယ်ကောင်းအောင်၊ လူတွေက စိတ်ချလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ SEO တည်ဆောက်ခြင်းက အဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ဒီ Fastword Platform ဟာ Google ကဲ့သို့သော Search Engine မှာ ပိုမိုလူသိမြင်ကြစေရန် ပြုလုပ်ထားပါတယ်
More Traffic and Sales with Ads
Google Analytics and Facebook Pixel toolsကိုအသုံးပြုပြီး Ads ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။
Removing complexities from payments & delivery.
Local & International Payment Methods
NinjaVan နဲ့ သင့်ရဲ့ ဝယ်ယူသူတွေကို ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်း၊ ငွေရှင်းခြင်းတို့ကို အချိန်ကုန် ငွေကုန်သက်သက်သာသာနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် ဝယ်ယူသူထံ ပစ္စည်းရောက်မရောက်ကိုပါ စစ်ဆေးနိုင်ဦးမှာပါ။ူ
NinjaVan နဲ့ သင့်ရဲ့ ဝယ်ယူသူတွေကို ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်း၊ ငွေရှင်းခြင်းတို့ကို အချိန်ကုန် ငွေကုန်သက်သက်သာသာနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် ဝယ်ယူသူထံ ပစ္စည်းရောက်မရောက်ကိုပါ စစ်ဆေး နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Online Shop ကို Androidနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် iOSနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်။
သင့်ရဲ့ ဝယ်ယူသူတွေက Click တစ်နှိပ်ယုံနဲ့ App ကို Google Play Store နှင့် Apple Store တို့တောင် မလိုအပ်ပဲ လွယ်ကူစွာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Seamless Performance for All Channels
အသုံးပြုသူတိုင်းဟာ သင့်ရဲ့ Online Shop ကို Google, Facebook နှင့်အခြားနေရာမျိုးစုံမှ URL လေးတစ်ခုဖြင့်သာ လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများစွာလည်း ရှိပါသေးတယ်။
From admin, sales, marketing, logistics and finance, create roles for different account access levels.
Sales and inventory reports available for export in Excel and csv formats.
Let customers rave about how much they love your products!
MMK, USD, SGD... you name it
Special items available foraspecific time only? No problem.
Same product with different sizes, colors, weights, dimensions. You can do that too!
Our clients are using fastforward to increase their sales and make their businesses more efficient
Stay up to date with everything about eCommerce